Mogadishu Journal » Xan ayaa leh: Real Madrid ayaa indhaha ku heysa Koulibaly, Man Utd ayaa bartilmaameedsaneysa Sancho £ 50m
Iyadoo Real Madrid ay raadineyso daafac dhexe, Kalidou Koulibaly ayaa lagu soo waramayaa inuu dookh yahay.
Real Madrid ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo Kalidou Koulibaly, halka Manchester United ay diirada u saaran tahay Jadon Sancho heshiis qiimo jaban.
Iyadoo aan hubin mustaqbalkiisa Sergio Ramos ee Madrid, kooxda LaLiga ayaa weli lala xiriirinayaa daafacyada dhexe.
Waxay umuuqdaan inay haystaan ​​xulashooyin badan - Xiddiga Napoli Koulibaly ayaa isna kamid ah.
SHEEKADA DUWAN - REAL MADRID LIKE KOULIBALY
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa jecel daafaca Napoli Koulibaly, sida laga soo xigtay AS.
Warbixinta ayaa sheegeysa in xiddiga Bayern Munich David Alaba, oo qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan, uu weli yahay dookha koowaad ee Madrid.
Iyadoo Ramos laga yaabo inuu baxo markii qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka ololaha, AS ayaa sidoo kale sheegaysa in daafaca Villarreal Pau Torres iyo kan Sevilla Jules Kounde ay qaali noqon doonaan.
- Manchester United waxay dooratay inaysan la soo saxiixan xiddiga kooxda Borussia Dortmund Sancho kahor 2020-21, waana laga yaabaa inay miro dhaliso. Eurosport ayaa qortay in United ay Sancho ku heli karto kaliya just 50million (€ 57.1m) suuqa kala iibsiga ee soo aadan. Kooxda ka ciyaarta Bundesliga ayaa dalbaneysay qiyaastii demanding 100m (€ 120m) Sancho sanadkii hore.
- Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Monchengladbach Florian Neuhaus ayaa umuuqda inuu soo jiito xiisaha badan. Wargayska Kicker ayaa sheegaya in kooxaha Bayern Munich, Borussia Dortmund, Liverpool, Man City iyo Juventus ay xiiso u qabaan xiddiga 3-da jeer ee reer Germany.
- Arsenal waxay umuuqataa inay sii xoogeysaneyso kahor xilli ciyaareedka soo aadan. The Sun ayaa ku warameysa inay ku dhowdahay inay dhameystiraan heshiiska 18 jirka Sporting CP ee Tiago Tomas oo ay ku dooneyso £ 20m (€ 22.8m).
- Amaah uu kaga soo qaatay Real Betis Barcelona, ​​Emerson ayaa laga yaabaa inuusan ku laaban Camp Nou. CalcioMercato ayaa ku warameysa in Milan ay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo daafaca midig.
- Weeraryahankii hore ee Milan iyo Chelsea Alexandre Pato ayaa ku biiri doona Orlando City heshiis hal sano ah, sida laga soo xigtay Fabrizio Romano iyo The Mane Land. Pato ayaa koox la’aan ahaa tan iyo markii uu ka tagay Sao Paulo bishii Ogosto ee sanadkii hore.